Maxay sameeyaan istaraatijiyad dib-u-dhac ah oo guuleysta?
Marka ay timaado geeddi-socodka Nidaamka Raadinta Goobidda (SEO), profile-baaga dabiiciga ah wuxuu ka mid yahay arrimaha ugu hooseeya ee Google ee loo isticmaalo si loo ogaado mawqif kasta ee saldhigga ee bogga SERPs. Taasi waa sababta ay u istcimaalaan istiraatiijiyad habboon oo ku habboon oo la xidhiidha horumarka dhabta ah ee kor u qaadista internetka ee ka badan wax kasta oo kale. Iyadoo la tixgelinayo in ay jiraan in ka badan 200 arrimood oo isdabajoog ah oo si rasmi ah u soo gudbiyay hay'adda weyn ee raadinta adduunka hadda, bayaankaas oo ku saabsan muhiimada ugu muhiimsan ee dib-u-qabashada tayada waa mid aad u muuqata, ma aha? Dabcan, helitaanka istiraatijiyad degdeg ah oo sahlan ayaa ka badan inta laga yaabo inay ku siiso xiriiryo hoose oo tayo leh. Taas macnaheedu waa in makiinadaha raadinta waaweyn (sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo, ama Bing) ay ku socdaan website-kaaga ama blog hoosaadyada liiska SERPs. Laakiin maxaa ka dhigaya istaraatijiyad dhisme oo isku xiran? Waxaan rumaysnahay in istaraatiijiyad kasta oo gadaal ah ay si sahal ah ugu noqoto mid si guul leh ugu guuleysato adigoo ka faa'iideysanaya awoodda warbaahintaada.
Xaqiijinta saxda ah
Looma baahna in laga yiraahdo in laga yaabo in laga yaabo in laga yaabo in laga yaabo in laga yaabo in laga yaabo in ay ka muuqato dhismaha isku xidhka, ma aha in dhammaan shabakadaha ama blogyada ay isku mid noqdaan si ay u siiyaan tilmaamo awood leh makiinadaha raadinta. Taasina waa sababta ugu badan ee qof walba uu rabo in uu la xiriiro ilaha dheeraadka ah ee leh dhibco xooggan bogga maamulka, hay'adda maamulka, iyo PageRank. Sidaa darteed, sida loo hubiyo istaraatiijiyada dhabarkaaga ayaa ah mid macquul ah oo lagu qiyaaso ilaha saxda ah ee xiriirada soo galaya? Adiga oo sameeya mar walba ansax ah oo si joogto ah ula socota bartilmaameedka saxda ah. Xogta macluumaadka kale ee warbaahinta, waxaan kugula talinayaa Cision inay bartilmaameedsadaan goobo sumcad leh oo la xiriira ganacsigaaga ama suuqa. Habkaas, waxaad awood u yeelan doontaa in aad sifayso musharax kasta oo suurtagal ah ee xiriirada soo galaya shuruudo kala duwan oo ku saabsan shirkadda, boggageeda, cabbirka dhagaystayaasha, abaalmarinta hadda, marqaatiga, iwm.
Miyaad ogtahay in la dhiso istaraatiijiyada gadaashaada ee ku saabsan hannaanka saxda ah ee warshadahaaga ama niche marketku kaa caawin karaan inaad dhisato kalsooni adag? Ku dhajinta Ingiriisi cad, macaamiishaada suuragal ah waxay u badan tahay inay u kobcaan iibsadaha dhabta ah, marka boggagaaga la soo sheego ama lala xiriiriyo ilo saddexaad oo la isku hallayn karo. Maxaa badanaa - wariyahan "shaqeynaya" ayaa aad uga xoog badan caymiska warbaahinta oo dhan. Kaliya qaado si aad u heshid - warbaahin lagu kalsoon yahay oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee leh saameynta ugu xooggan ee dadka dhagaystayaasha ku leh ee leh hanti aan horumarin oo aan weli horumarin. Get Media Media
Ka shaqeynta warbaahinta kasbatay maaha sidii ay u adkaatey sidaad u malayn karto. Dhab ahaantii, ma jiri doonto wax dhaqdhaqaaq ah oo waqti-dhaqameed ah oo loo baahan yahay si loogu baahdo warbaahinta, ugu yaraan inay sameeyaan istaraatiijiyad dib-u-dhac ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan waxay leedahay fursad iyo awood u lahaanshaha inay ka jawaabaan fursadaha warbaahinta ee la kasbaday, kuwaas oo si caadi ah u qaylinaya saxafiyiinta. Habkaas, waxaan kugula talinayaa isticmaalka qalabyada internetka sida HARO ("Help a Reporter Out"), iyo sidoo kale ProfNet - Waxaan ka helnay labadaba si buuxda ugu habboon blog-ka cusub ee dhowaan billaabay iyo mashaariic dhowr ah oo ku salaysan. Kaliya iska diiwaangali goobahan iyo noqo runta rasmiga ah ee warshadahaaga ama suuqa xorta ah - ka hel codsiyada maalin kasta ee saamileyaal sareeya raadinta khabiirada in lagu wareysto ama lagu daro sheekooyinka caanka ah ee ugu caansan, waxaana lagu helaa xoogaa dheeraad ah Source .